Mihaona Ivelan’ny Aterineto ireo Mpikatroka Nomerika Hampiroborobo Ny Fimaroam-Piteny Antserasera Ao Bolivia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2016 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Aymara, English, Español, English
Sarin'ireo mpandray anjara tamin'ny atrikasa tao Cochabamba, Bolivia
Araka ny lalàm-panorenana ao amin'ny firenena, ankatoavina ho fiteny ofisialy ireo fiteny rehetra misy 37 ao Bolivia. Na izany aza, raha hita eo amin'ny fiainana andavanandro izany fiteny samihafa izany, tsy mba hita taratra ao amin'ny aterineto kosa, izay ny teny Espaniola no mbola fiteny matanjaka indrindra.
Na dia nipoitra aza ny fandraisana andraikitra nomerika hampiroboroboana ireo teny indizeny miisa 36, maro ireo mifantoka amin'ny teny be mpampiasa indrindra tahaka ny Aymara sy ny Quechua. Maro amin'ireo teny 34 ambiny kosa no mbola tsy manana fisiana manan-danja amin'ny aterineto avy amin'ireo mpampiasa ny teny.
Nanasongadina ny fanamby hampidirana ny teny Boliviana rehetra nandritra ny atrikasa naharitra roa andro natao tao an-tanànan'i Cochabamba tamin'ny 28-29 Jolay, 2016 ireo indizeny mpikatroka nomerika. Niarahana nikarakara tamin'ny Global Voices tamin'ny alalan'ny Rising Voices ny fihaonana sy ny fiarahamiasa koa amin'ireo mpikatroka nomerika ao an-toerana Camacho Gladys sy Juan Carlos Romero, miaraka amin'ireo mpiara-miasa Jaqi Aru sy ny Voces Indígenas Urbanas.
Foibe Ara-kolontsaina sy Ara-pampianarana Simón I. Patiño no nampiantrano ny hetsika. Ity atrikasa Boliviana ity dia tafiditra amin'ireo andiana atrikasa notontosaina manerana ny faritra niaraka tamin'ireo mpiara-miasa eo an-toerana, anisan'izany ny tao Meksika, Kolombia ary Però.
Ho fitarihana ny atrikasa, nisy ny antso fandraisana anjara ao an-toerana izay miantefa amin'ireo indizeny mpiserasera aterineto efa miasa mamelona ny fiteny niavian'izy ireo. Nosafidiana arakaraky ny jeografia sy ny fisoloan-tena amin'ny teny ireo mpandray anjara, fepetra iray lehibe ihany koa ny fahavononana hizara ny fahalalana sy ny fahaizan'izy ireo amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo manokana.
Fangatahana teo amin'ny 50 teo no voaray, ary araka ny efa nampoizina, Quechua sy Aymara no tena betsaka indrindra tamin'ireo liana handray anjara. Na izany aza, taorian'ny ezaka fanentanana, indrindra ho an'ireo vondrom-piarahamonina ao Bolivia Atsinanana, nosafidiana ihany koa ireo mpandray anjara misolo tena ny vondrom-piarahamonina Guaraní, Chacobo, Bésiro, Mojeño Trinitario ary Yurakaré.
Raha atambatra, miisa 25 ireo mpandray anjara nasaina tamin'ny atrikasa naharitra roa andro mba hizara ny traikefan'izy ireo, sy hanorina fahaiza-manao nomerika vaovao, ary hampifandray ireo Boliviana hafa miasa ho amin'ny famelomana indray ny tenin-drazan'izy ireo amin'ny alalan'ny fampiasana ny aterineto.
Tsy mahalala sisin-tany ny teny, ka ampiasaina ao amin'ireo firenena manodidina ihany koa ny sasany amin'ireo teny indizeny ao Bolivia. Raha vao nahita ny antso hanaovana tolo-kevitra, dia nangataka ny handray anjara amin'ny fihaonana ihany koa ny vondrona mpikatroka avy ao Resistencia, ao Arzantina izay miteny ny fiteny Qom (na Toba araka ny ahafantarana azy ao Bolivia).
Ny tanjon'ny fihaonana voalohany dia ny hamorona sehatra hifanakalozana traikefa eo amin'ireo mpikatroka samihafa. Nandritra ny roa andro, nisy ny fivoriana naharitra ela notarihin'ireo mpanentana sy mpandray anjara mikasika ny fiteny sy ny fanamby ara-teknika mifandraika amin'ny fampiasana ny teny ao amin'ny aterineto.
Nifantoka tamin'ny fampahafantarana manokana ny tetikasan'izy ireo tsirairay avy ny ankamaroan'ny fandaharam-potoana ambiny. Ohatra, Elias Ajata, bilaogera mavitrika avy ao an-tanànan'i El Alto, mamorona votoaty tao amin'ny YouTube, SoundCloud sy ny tranonkala media sosialy hafa. Nandritra ny fampahafantarana, nampiseho karazana sary-sy-soratra sy votoaty hafa noforonina tamin'ny alalan'ny tetikasany Aymar Yatiqaña izy, ary nozaraina voalohany indrindra tao amin'ny vondrona Facebook manana mpikambana maherin'ny 8000 izany. Ny lahatsary manaraka noforonina tamin'ny fotoana nanaovana ny fitsapan-kevibahoakan'ny taona 2016 momba ny lalàmpanorenana amin'ny hamelàna na tsia ny filoha sy ny filoha lefitra hirotsaka hofidiana fanintelony mifanesy. Mampiasa saribakoly miteny Aymara ny lahatsary mba hampisehoana ny fizarazarana mampiady eo amin'ireo mpifidy ny “Eny” sy “Tsia”.
Nampiditra lesona hianarana ny teny Aymara tao amin'ny tranonkala Wix antsoina hoe Aymaryaya, i Josue Qhispi, mpikatroka iray hafa avy ao El Alto, ary nozarainy tao amin'ny vondrona Facebook ihany koa izany.
Niresaka ny antony nanosika azy ireo handray anjara amin'ny maha tonian-dahatsoratra sy mpandika lahatsoratra amin'ny tetikasa Global Voices amin'ny teny Aymara, mandika ho amin'ny teny Aymara ireo fitantarana vaovao amin'ny teny Espaniola ireo mpandika teny an-tsitrapo Victoria Tinta sy Gloria Chambi. Ahitana tetikasa fitaratra mamokatra votoaty am-peo an'ireo fandikan-teny ireo ihany koa izay natao ampiasaina amin'ny aterineto ity asa ity ary miara-miasa amin'ny onjam-peo Radio San Gabriel, izay nandray anjara tamin'ny hetsika ihany koa.
Sokajiana ho iray amin'ireo fiavian'ny teny Quecha ny tanànan'i Cochabamba mampiantrano ny hetsika. Amin'ny sehatra ao an-toerana, nitàna andraikitra lehibe ny Oniversitem-panjakana San Simón (UMSS) tamin'ny fampandrosoana ny fitaovana hampiroboroboana ny teny amin'ny aterineto, tahaka ny sehatra fandraisam-peo media marolafy Quechua natsangan'ny ekipam-pampianarana fiteny sy ny fampiharana momba ny teny ao amin'ny UMSS. Fanampin'izany, mavitrika tanteraka miaraka amin'ny Departemantan'ny momba ny teny ao amin'ny oniversite ihany koa ny roa amin'ireo mpikarakara ny atrikasa, Gladys Camacho sy Juan Carlos Romero ary nandray anjara ho mpampianatra Quechua ihany koa. Samy nizara ny traikefany amin'ny fampiroboroboana ny teny amin'ny alalan'ny sehatra haino aman-jery isan-karazany izy roa tonta.
Nanohy ny fianarany tao amin'ny Oniversiten'i New York izay nandraisany anjara tamin'ny tetikasa fandraisam-peo Rimasun i Camacho .Tao anatin'ny asa fampianarany, naka lahatsary maneho toe-javatra andavanandro mampiasa ny teny Quechua i Romero, anisan'izany ity manaraka ity izay nitranga tao amin'ny biraon'ny mpitsabo nify.
Miorina ao amin'ny Departementan'i Santa Cruz, nizara ny asan'izy ireo mihaino sy manamafy ny feon'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany monina any amin'ny tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena, Santa Cruz, ny tetikasa Voces Indígenas Urbanas. Anisan'ny lohahevitra resahan'izy ireo tsy tapaka ny maha zava-dehibe ny fikolokoloana ny fiteny. Maro tamin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa no mampiroborobo hatrany ny tenin-drazan'izy ireo ao amin'ny media sosialy.
Manohy mampiseho ny tombontsoa sy ny filàna fihaonana tahaka izao ny atrikasa Boliviana mba hampifandray ireo indizeny mpiserasera aterineto nanolo-tena hiaro sy hampandroso ny fiten'izy ireo miaraka amin'ny fanampian'ny teknolojia nomerika. Matetika mampiseho taratra ny hafa ny traikefan'izy ireo manokana, na inona na inona fiteny, ary afaka manampy hizaràna ireo lesona nianarana ny sehatra virtoaly sy tena izy ary lasa vondrom-pananganana famoronana tambajotran'ny mpikatroka nomerika ao an-toerana izay manana andraikitra mitovy.
Fanabeazana 11 Febroary 2022
El Salvador 04 Janoary 2022
Fanabeazana 14 Septambra 2021